Ady amin'ny “cyberminalité” Lasa fitaovam-piadian'ny fitondrana
Toa manao ririn-dasa tsy tsaroina ny mpitondra ankehitriny. Raha tsiahivina dia ny taona 2018 dia nilanja vatapaty mihitsy ny olon` ny fitondrana ankehitriny hanehoana ny fitsipahana ny filoha teo aloha, Hery Rajaonarimampianina.
Saingy tamin` izany dia tsy misy no nigadra na nampanantsoina eny amin`ny sampan-draharaha misahana ny ady amin'ny “cybercriminalité”. Ny zava-misy amin` izao dia mirangaranga amin` izay maneho hevitra mafimafy manakiana ny fitondrana ny ny fonja; ary misy fotoana tena ny fitondram-panjakana mihitsy no mpitory . Marina fa misy mihoa-pefy indraindray ireo mpikirakira aterineto; saingy ny mahagaga ny mpandinika dia tsy misy voakitika ireo manoso-potaka sy miteny ratsy ny olona sokajiana fa mpanohitra.Mitazam-potsiny ny manampahefana. Izay tokoa angamba ny hoe rehefa ianao no manao hadisoana dia ara-dalàna fa rehefa ny hafa dia tanisaina ireo karazana lalàna handetehana azy. Tsy tokony hisy mizana tsindrian' ila anefa ny fampiharana ny lalàna.